Xiriirsanaan Kusugnaanta inta uu socdo Coronavirus
Iyadoo dalkeennu wado maaraynta degdegta ee COVID-19, Comcast waxay qaadaysaa tillaabooyin degdeg ah si Comcast qoysaska dakhliga hooseeya ugu sahasho in guryahooda loogu xiro Intarneedka guriga.
Meelmarinta Barnaamijka Xiriirsanaanta Jaban awgiis Bisha 12-aad30, 2021, Comcast waxay taariikhdaas gabbalka u ridaysaa labadii bilood ee lacag-la'aaneed ee koruqaadista loogu talagalay. Taariikhdaas kadib, macaamiisha Internett Essentials Essentials waxay kaliya heli karaan adeeg Internet oo lacag-la'aana haddii ay ku biiraan Barnaamijka Xiriirsananta Jaban.
Waxaa dhammaan macaamiisha cusub ee Internet Essentials, xawliga adeegga barnaamijka Intarneedka looga qaaday25 Mbps oo qulqul-hoosaada iyo 3 Mbps qulqul-koraada ioa 50 Mbps oo qulqul-hoosaada iyo 10 Mbps qulqul-koraada.
Qoysaska deymo ka qaba Comcast waxaa dhici karta inay u qalmaan Internet Essentials. Waxaan dhaafaynnaa shardigaan haddii aad codsato waxaana ansixinaya06/30/22. Kadib06/30/22, waxaa lagu dhaqayaa xeerarka u-qalmashada asaasiga.
Wax badan baro
Su'aalaha aalaa la is weyddiiyo
Waxyaalaha ay tahay in la ogaado
Miyaan ku noolahay aag aan ka heli karo Internet Essentials-ka Comcast?
Waa inaad ku nooshahay aag laga helaayo Si aad u hubiso in cinwaankaaga u qalmo adeegga click here.
Miyaan u qalmaa Internet Essentials?
Waa dhici kartaa inaadd u qalanto haddii adigu:
Tayada barnaamijyada sida BarnaamijkaQadada Dugsi Qarameedka, kaalmaynta guriyeynta, Medicaid, SNAP, SSI, Deeqda Pell ee Fedaraalka iyo kuwo kale.
Ku nool meel laga helaayo adeegga Comcast Internet
Maan haysan comcast Internet maalmihii 90 la soo dhaafay
Qoysaska ka qaba lacag Comcast waxaa suurtogal ah inay u qalmaan haddii la ansixiyo ilaa06/30/22
Is-qoritanaku waa fudud yahay wuxuuna ku dhoqso badan yahay taleefan-kaaga gacanta, apply now.
Waxaan ahay macmiil Internet Essentials waxaana maqlay xawliga la kordhiyay, miyaan u baahnahay inaan wax sameeyo?
Dhammaan macaamiisha Internet Essentials ee cusub iyo kuwii horaba, xawliga adeegga barnaamijka haatan50 Mbps qulqul-hoosaad iyo 10 Mbps qulqul-koraad! Ma jirto baahi loo qabo in wax la sameeyo, macaamiishii hore waxaa si is wadda loogu daray kordhintaan xawliga.
Anigoo ah macmiil cusub sidee baan u heli karaa kor-u-qaadista labada bilood oo lacag-la'aanta?
Waxaan ka qabaa Comcast lacag muddadaan qabay ay ka yar tahay hal sano, ee hadda ma u qalmaa Internet Essentials?
Maadaama ay jirto xaaladda degdegta ee Coronavirus, qoysaska ay Comcast ku leedahay deymo wali taagan waxaa dhici karta inay u qalmaan Internet Essentials. Waxaan dhaafaynnaa shardigaan haddii aad codsato waxaana ansixinaya06/30/22. Kadib06/30/22, waxaa lagu dhaqayaa xeerarka u-qalmashada asaasiga. Taas macnaheedu waa qoys kasta oo dakhligiisu hooseeyo oo hadda u ahayn Xfinity macmiil ama aan adeegga Interneedka Xfinity lacago sii dhigan90 maalmood oo la soo dhaafay, laakiin shirkaddu ku leedahay lacag muddadeedu ka yar tahay (shirkadaha lacagaha leh, XfinityTV, Xfinity Internet, Xfinity-ga guriga, ama Internet Essentials), u ma qalmi doona Internet Essentials.
Isqoristu way fududdahay waxayna ku dhoqso badan tahay taleefankaaga gacanta, aad : https://apply.internetessentials.com/
Marka la ii ansaxiyo Internet Essentials, muddo intee le'eg bay igu qaadan doontaa inaan helo adeegga Intarneedka?
haddii aad doorato xirmada iska-u-rakabidda, fadlan oggolow 5-7 maalmood si aad u hesho xirmada.
Ma iska goyn karaa Intenet Essentials waqti kasta?
Haa, waxaad iska jari kartaa Internet Essentials waqti kasta. Maadaama uusan jirin heshiis qoran, macmiilku wuxuu iska jari karaa adeegga Internet Essentials ganaax-la'aan. Haddii aad doonayso inaad iska jarto fadlan guji halkaan
Waxaan ahay macmiil hore ee Internet Essentials, ma heli karaa labo bilood oo lacag-la'aana?
Waxaan kugu xushmaynaynna inaad tahay macmiil Internet Essentials. In kasta oo aan ku siin karno labo bilood oo lacag-la'aana, haddii aad tahay macmiil Internet Essentials, waxaad u qalantaa Barnaamijka Xiriirsanaanta Jaban waxaad-na kaliya u baahan tahay inaad barnaamijka ku biirto. Haddii aad tahay macmiilka Internet Essentials, buuxi foomka isqoritaanka halkaan. Marka aad ku biirto, waxaad heli doontaa tixgelin aad si buuxda ugu daboolayso qarashkaaga Internet Essentials ($9.95/month (lagu daray canshuuraha fuuli kara iyo khidmado) ilaa inta miisaaniyadaha ACP ee Dwaladda Fedaraalka ee Dawladdu jiraan. Guji halkaan si aad wax uga sii ogaato sida loo codsado Barnaamijka Xiriirsanaanta Jaban.
Anigu u ma qalmo Intenet Essentials laakiin waxaan u baahnahay xiriirinta Intarneedka guriga. Maxaan sameeyaa?
Comcast ahaan waxaan samaynaynnaa wax kasta oo aan awoodno si aand dadka u caawinno waqtigaan aan caadiga ahayn ee lagu jiro. Waxay muhim u tahay dhammaan qoysaska inay guu xiriirsanaadaa Intarneedka - waxbarasho, shaqo, iyo sababo caafimaad awgood. Taas awgeed baan ugu faraxsanahay inaan adig kuu soo ban dhigno tirada Xirmooyin qiime sare leh si loo hubiyo inaad hesho ilaha aad u baahan tahay si aad ammaan u hesho oo xiriirsanaato. Fadlan booqo https://www.xfinity.com/learn/offers.
Ka warran haddaan su'aalo dheeri ah u qabo Internet Essentials?
Liis buuxa oo ka kooban badi su'aalaha la is weyddiiyo awgiis fadlan/booqoKaalmo Hel.
Tillaabso 1: U Qalan
Waa suurtogal inaad u qalanto Internet Essentials haddii
Adigu waxaad u qalantaa barnaamijyada kaalmaynta dadweynaha sida Barnaamijka Qadada Dugsi Qarameedka, Kaalmaynta Guriyeynta, Medicaid, SNAP, SSI, Deeqda Pell ee Fedaraalka iyo kuwo kale.
Waxaad ku nooshahay aagga laga helaayo adeegga Internet Essentials.
Adigu ma tihid macmiil Xfinity Internet hore u jiray mana aadan is qorin Comcast Internet 90 maalmood ee la soo dhaafay.
Comcast kugu ma laha deyn wali taagan oo muddadeedu ka yar tahay hal sano. Qoysaska lagu leeyahay deymo wali taagan oo muddadoodu ka badan tahay hal sano waxaa dhici karta inay wali u qalmaan.*
*Maadaama ay jirto xaaladda degdegta ee Coronavirus, qoysaska ay Comcast ku leedahay deymo wali taagan waxaa dhici karta inay u qalmaan Internet Essentials. Waxaan dhaafaynnaa shardigaan haddii aad codsato waxaana ansixinaya06/30/22. Kadib06/30/22, waxaa lagu dhaqayaa xeerarka u-qalmashada asaasiga.
Tillaabso 2: Codso
Is-qoritaanku wuxuu ku fudud yahay oo ku dhoqso badan yahay taleefankaaga. Waxaa dhici karta in markiiba laguu ansixiyo!
Tillaabso 3: Ha Laguu Ansixiyo
Waxaan eegi doonnaa codsigaagii dhammaystirnaa waxaana kugu soo war gelin doonnaa SMS-ka, iimayl ama boostada maroorsan haddii lagu ansaxiyo. Haddii aan u baahanno xaashiyo sida ugu dhoqso badan oo loo soo gudbiyaa waa inaad sawirkooda ku qaaddaa talfeenkaaga kadibna aad raacisaa codsiga!
Tillaabso 4: Onlaynka Gal
Haddii lagu ansaxiyo waxaad ku heli kartaa xiriirinta Intarneedka 5-7maalmo ganacsiyeed. Isticmaal hagaha tillaabo-tillaabada ee la socda qalabkaaga intarneedka (oo ay ku jiraan moodamka iyo jiheeyaha WiFi) si aad u yagleesho adeeggaaga.